A ga - enweta foto Google site na ihe nchọgharị faịlụ Chrome OS | Gam akporosis
Ruo afọ ole na ole gara aga, ndị ọrụ Google Drive nwere ike ịnweta ọbá akwụkwọ ha nke foto dị na Foto Google, ọrụ nke Google ehichapụ na-ekwu na ọ nweghị isi, mkpebi nke na-adabara ndị obodo ahụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ anyị ga-eme ma ọ bụghị ịnakwere ya.
Site na mkpochi nke coronavirus kpaliri, ọtụtụ ndị abụwo ndị họọrọ maka Chromebook inwe ike gaa n'ihu na-arụ ọrụ ma na-amụ n'ụlọ. Google Chrome na-ejikwa ngwaọrụ a, sistemụ arụmọrụ nke ga-amaliteghachi ịnweta foto dị na Foto Google.
Dabere na ụmụ okorobịa si Android Police, Google na-arụ ọrụ na Njikọ foto Google yana njikwa faili Chrome OS. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ nwere Chromebook ga-enwe ike ịnweta foto niile echekwara na Foto Google na-enweghị ibudata ha na ngwaọrụ ha na mbụ, yabụ ha nwere ike ịhazi ha ozugbo na igwe ojii.
N'ụzọ dị otú a, Chrome OS na-etinye otu ọrụ ahụ ị ga-enweta n'oge na-adịghị anya Ọzọkwa Google Drive file manager ngwa maka PC na Windows, ngwa na-enye ohere na-arụ ọrụ na faịlụ na ina, nke ahụ bụ, ọ gaghị adị mkpa ibudata ọdịnaya niile sitere na igwe ojii anyị iji nwee ike iso ha rụọ ọrụ, a ga-ebudata ha dịka mkpa anyị.
Chromebook, ezigbo maka agụmakwụkwọ
Ngwaọrụ Chromebook ha dị mma maka ebe agụmakwụkwọ, ọkachasị n ’ụlọ ọrụ ndị ahụ anabatala usoro Google iji jikwaa ụmụ akwụkwọ.
Otú ọ dị, ọ bụghị ihe ngwọta maka onye ọrụ ọ bụla Onye chọrọ iji ngwa ndị dị naanị na Windows, ọ bụ ezie na Storelọ Ahịa Play (nke Chromebooks nwere ohere), anyị nwere ike ịchọta ụzọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Foto Google ga - enweta site na ihe nchọgharị faịlụ Chrome OS
Carl Pei (OnePlus) zụtara Essential (Andy Rubin) na mbubreyo 2020